Igbo AKARA NKE ANỤ ỌHỊA! Na akwụkwọ Mkpughe (n'akwụkwọ ikpeazụ nke the Holy Bible) na anyị na-dọsie aka ná ntị megide anata akara nke anụ ọhịa (i.e. àmà na-egosi!). Ma, gịnị n'ezie bụ akara nke anụ ọhịa? Na ka nke a na akara nwere ihe ọ bụla na-eme na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba 666? Ma ọ bụ, bụ akara nke anụ ọhịa ihe dị nnọọ iche & iche site aha nke anụ ọhịa na akara bụ 666? Na ihe kpọmkwem bụ aha nke anụ ọhịa na agbanyeghị? Ọ bụ otu onye, ​​otu mba, a ìgwè nke mba, ma ọ bụ a na chọọchị? Na ihe banyere nke a akara-ọ bụ nkịtị, anụ ahụ MAK? Ma ọ bụ otú ọ na kama inwe ihe atụ, nọchiri anya? Ka na-amalite anya na anyị ọchịchọ ịza ajụjụ ndị a site mbụ atụgharị atụgharị ka Mkpughe 13: 16-17. Ebe a gwara anyị na anụ ọhịa "chọrọ onye ọ bụla-obere ukwu, ndị ọgaranya na ndị ogbenye, free na ohu-ka e nye a MAK n'aka-nri ma ọ bụ n'egedege ihu. Na ọ dịghị onye pụrụ ịzụta ma ọ bụ ire ihe ọ bụla na-enweghị na MAK, nke bụ ma na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba -anọchite anya AHA YA "(NLT). Ya mere, nke a Akwụkwọ Nsọ na-eme ka ọ na-zuru okè na akara nke anụ ọhịa bụ nanị ma na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba na-anọchi anya aha ya. Ya mere, nwere akara nke anụ ọhịa on ị bụ otu ihe ahụ dị ka ndị nwere aha nke anụ ọhịa on ị (ma ọ bụ nọmba na-anọchi anya aha-ya-666!). NUMER NKE ANỤ ỌHỊA-666! Ma, gịnị mere ọnụ ọgụgụ 666? Olee otú nke a ọnụ ọgụgụ na-anọchi anya aha ya? Ka anyị ka Bible zaa ajụjụ ahụ. Mkpughe 13:18 (LB) - "... space ụkpụrụ nke akwụkwọ ozi n'aha-Ya tinye 666." Nke a Akwụkwọ Nsọ kwuru hoo haa, na-egosi na 666 bụ nanị space nchikota uru nke aha nke anụ ọhịa! Dị ka ihe atụ, na-aha "VIX." Ọ bụrụ na anyị na-eji "Roman numerals" mgbe ahụ V = 5, m = 1, & X = 10. Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye ihe na space uru nke ọ bụla akwụkwọ ozi nke a aha (5 + 1 + 10) anyị na-enweta 16. ya mere, Vix ike omume na-anụ ọhịa n'ihi aha ya naanị agbakwụnye ruo 16 (mgbe aha nke anụ ọhịa ga tinye aka 666). Ma ọ bụrụ na Vix bụ anụ ọhịa, onye bụ? WHO BỤ ANỤ ỌHỊA? Ya mere WHO bụ nke a anụ ọhịa ahụ (i.e. àmà na-egosi)? Ọ bụ a United European superpower (a di ndu "Holy" Alaeze Ukwu Rom) dị ka ụfọdụ na-akụzi? Ma ọ bụ bụ anụ ọhịa onye ndú nke a dị ndụ ọzọ usoro? Anụ ọhịa bụ ihe atụ nke abụọ-ma alaeze ukwu ahụ na onye ndú! Ma mbụ ọ pụtara ya onye ndú. Iji gosi na ọ pụtara ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú nke a n'oge na-adịghị-abịa usoro ka na-echigharịkwuru ọzọ Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ Mkpughe. Mkpughe 19: 20- "Mgbe ahụ, anụ ọhịa ahụ e weghaara, ya na onye amụma ụgha .... Abụọ ndị a na-achụpụ ndụ n'ime ọdọ ọkụ na-ere brimstone "(NKJ). Nke a Akwụkwọ Nsọ gosiri n'ụzọ doro anya na anụ ọhịa ahụ nọchiri anya ihe ọgwụgwụ oge mmadu, n'ihi na ma ya ma ndị amụma ụgha na-ẹsịn ọdọ ọkụ! NKỊTỊ, ANỤ AHỤ MAK? Ma, gịnị n'ezie bụ akara nke anụ ọhịa, nke e ji a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú? Ọ ga-abụ a n'ụzọ anụ ahụ, nkịtị MAK (ma ọ bụ onye a bụ akara dị nnọọ a tụnyere, na-enwe ụdị ụfọdụ nke zoro ezo, omimi pụtara)? The akara nke anụ ọhịa ga-maa-abụ a nkịtị anụ ahụ akara! Na Mkpughe 13:16 & 14:11 ọtụtụ dị iche iche nsụgharị nke Bible (GW, NOG, EXB, ọchịchị, & na JB) ala na akara nke anụ ọhịa ga-"kpọọ ndị" na mmadu. The AMPC, NABRE, & ndị EXB ala na akara nke anụ ọhịa ga-zọọ na ndị mmadụ. Ma m na-amasị otú Living Bible na-asụgharị n'amaokwu abụọ ndị kasị mma, dị ka ọ na-ekwu na akara nke anụ ọhịa ga-"egbugbu" on ụmụ mmadụ! Ma n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na akara nke anụ ọhịa-ewere, zọọ, ma ọ bụ egbugbu, ndị a niile nsụgharị ji otu olu na-ekweta na akara ga-a nkịtị anụ ahụ MAK na ndị ọzọ ga-adị mfe-enwe ike ịhụ! ANATA MAK = ỊKWADO SATAN! Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ Mkpughe nke ọma (karịsịa isi nke 14) Ị ga-achọpụta na onye ọ bụla ji obi ya enweta akara nke anụ ọhịa ga-nnọọ ahụhụ site na Chineke. Ma Chineke n'ezie ga ajọ omume na onye nwere a akara ahụ amanye n'elu ha aka, ọ gaghịkwa ata onye ọ maghị na-enweta nke a akara (dị ka ụfọdụ izu ọjọọ theorists akụziri)! The mmadụ ga-akpachara, ji obi anabata akara. Ma onye ọ bula na ọ kpachaara-enye ohere akara nke anụ ọhịa ka-etinye na ya ma ọ bụ ya aru (ma na ha n'aka nri ma ọ bụ n'egedege ihu ha) ga-aga megide Chineke kpọmkwem! Kama ige Onye Okike ha, ha ga-kama a ga-erubere Setan isi! Ha ga na kachasi mkpa na-pledging nkwado ha na iguzosi ike n'ihe ha na-Setan bụ Ekwensu (lee Nkpughe 13:16 ma IGBOB & EXB nsụgharị nke Bible)! Na ndị na-eme otú ahụ ga-dọsie ya ahuhu, ndị Chineke na Ha ga-abụkwa enweghị ihe ngọpụ, n'ihi na ọ bụghị nanị na ahụ ga-adị àmà abụọ (ma ọ bụ amuma) na-gwakwa ha na ha na-efe anụ ọhịa (ma ọ bụ ya awụ) ma ọ bụ na-enweta ya akara, ma otu mmụọ ozi si n'eluigwe ga-enye iwu ndị bi n'ụwa agaghị eme otú ahụ (Mkpughe 14: 9)! AHA NKE ANỤ ỌHỊA? N'ihi ya, gịnị bụ aha nke anụ ọhịa? Na onye ga-a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú abụ? Onye ọ bụla ọ bụ, otu ihe anyị maara n'ezie, akwụkwọ ozi n'aha ya ga tinye aka 666! Ma ọ bụla pụrụ isi na-eche nke a mma aha karịa Rom? Na mbụ, "Rom" nwere ike sụgharịrị dị ka "LATEINOS" n'asụsụ Grik,. (Ma gịnị mere na-eji asụsụ Grik? N'ihi na ọtụtụ ndị New Testament mbụ e dere ihe na Greek-gụnyere akwụkwọ Mkpughe). N'asusu Grik "L" na-anọchi anya nọmba 30, "A" bụ 1, "T" bụ 300, "E" bụ 5, "m" bụ 10, "N" bụ 50, "O" bụ 70, na " S "na-200. Tinye ha (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) gịnịkwa ka ị ga-esi? 666! Nke abuo, ma ọ bụrụ na aha ya bụ "Rom," ọ ga-adị ka ozizi Atọ n'Ime Otu dị ka ọ ga na-anọchi anya ihe atọ na otu. Ọ bụghị naanị na ọ ga-eji aha a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú, ma ọ na-ga-anọchi anya Alaeze Ukwu Rom nakwa dị ka onye Rom (Catholic) Church. ỊDỌ AKA NA NTỊ! N'agbanyeghị ihe ị na-eme n'ọdịnihu, DỊGHỊ (n'ọnọdụ ọ bụla ha ra, bú!)-Enweta akara nke anụ ọhịa ma ọ bụ na-efe ya (i.e. àmà na-egosi) ma ọ bụ ya kpụrụ akpụ !!! "Ụmụntakịrị, ọ bụ awa ikpeazụ; na ka unu nụrụ na ... àmà na-egosi na-abịa ... The nwoke nke mmehie ... nwa adiana ke adiana, onye na-emegide ma ebuli onwe ya elu karịa ihe ọ na-akpọ Chineke ma ọ bụ na-efe ofufe ... Ọ ga-ọbụna-anọdụ ala ụlọ nsọ Chineke, na-azọrọ na ya onwe ya bụ Chineke "(1 John 2:18 NKJ; 2 Thess. 2: 3-4 NKJ; 2 Thess. 2: 4 NLT). "Mgbe ahụ, o wee meghee ọnụ na nkwulu e kwuluru Chineke, na-ekwulu aha ya, ya ụlọikwuu ahụ nakwa ndị bi n'eluigwe. Ewe enyekwa ya ike ka agha ndị nsọ [EZIGBO Ndị Kraịst] na imeri [imeri] ha. Na ikike e nyere ya ọ bụla n'ebo, ire, na mba. Na ndi nile bi n'elu ụwa ga-efe ya, ndi aha-emeghị dere ha n'Akwụkwọ nke Ndụ ... "(Nkpughe 13: 6-8 NKJ). "Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-efe anụ ọhịa ahụ [i.e. àmà na-egosi] na onyinyo [i.e. ya awụ], na-enweta ya akara na ọkpọiso ma ọ bụ n'aka ya, ya onwe ya ga-aṅụ mmanya nke iwe Chineke, nke a na-awụpụ zuru ike nime iko nke iwe ya. Agēme kwa ka o emekpa ọkụ na brimstone n'iru mmụọ ozi dị nsọ na n'ihu Nwa Atụrụ ahụ [i.e. Jesu Kristi]. Na-ese ha ntaramahụhụ ọdọk ke nsinsi nsinsi, na ha nwere adịghị ike ụbọchị ma ọ bụ n'abalị, ndị na-efe anụ ọhịa ahụ na onyinyo ya, na onye ọ bụla-enweta akara aha ya "(Mkpu 14: 9-11 NKJ). Maka ozi ọzọ banyere akara anụ ọhịa ahụ, biko gụọ "Mkpughe Abịa Dị Ndụ" na "The àmà na-egosi & The Final 7 Afọ." Ihe e dere dị maka FREE na: www.TheBibleComesAlive.com igbo = igbo Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịgụ nke ọ bụla n'ime m isiokwu ma ọ bụ akwụkwọ na asụsụ gị, dị nnọọ pịa na-esonụ njikọ: https://translate.google.com. Nke a njikọ ga-ịsụgharị niile m na ihe odide site English na asụsụ gị. Ma, ọ nwere ike na-asụgharị 1 page na a oge. — Other Books & Articles in Your Language — If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.
AKARA NKE ANỤ ỌHỊA!
Na akwụkwọ Mkpughe (n'akwụkwọ ikpeazụ nke the Holy Bible) na anyị na-dọsie aka ná ntị megide anata akara nke anụ ọhịa (i.e. àmà na-egosi!). Ma, gịnị n'ezie bụ akara nke anụ ọhịa? Na ka nke a na akara nwere ihe ọ bụla na-eme na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba 666? Ma ọ bụ, bụ akara nke anụ ọhịa ihe dị nnọọ iche & iche site aha nke anụ ọhịa na akara bụ 666? Na ihe kpọmkwem bụ aha nke anụ ọhịa na agbanyeghị? Ọ bụ otu onye, ​​otu mba, a ìgwè nke mba, ma ọ bụ a na chọọchị? Na ihe banyere nke a akara-ọ bụ nkịtị, anụ ahụ MAK? Ma ọ bụ otú ọ na kama inwe ihe atụ, nọchiri anya?
Ka na-amalite anya na anyị ọchịchọ ịza ajụjụ ndị a site mbụ atụgharị atụgharị ka Mkpughe 13: 16-17. Ebe a gwara anyị na anụ ọhịa "chọrọ onye ọ bụla-obere ukwu, ndị ọgaranya na ndị ogbenye, free na ohu-ka e nye a MAK n'aka-nri ma ọ bụ n'egedege ihu. Na ọ dịghị onye pụrụ ịzụta ma ọ bụ ire ihe ọ bụla na-enweghị na MAK, nke bụ ma na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba -anọchite anya AHA YA "(NLT). Ya mere, nke a Akwụkwọ Nsọ na-eme ka ọ na-zuru okè na akara nke anụ ọhịa bụ nanị ma na aha nke anụ ọhịa ma ọ bụ nọmba na-anọchi anya aha ya. Ya mere, nwere akara nke anụ ọhịa on ị bụ otu ihe ahụ dị ka ndị nwere aha nke anụ ọhịa on ị (ma ọ bụ nọmba na-anọchi anya aha-ya-666!).
NUMER NKE ANỤ ỌHỊA-666!
Ma, gịnị mere ọnụ ọgụgụ 666? Olee otú nke a ọnụ ọgụgụ na-anọchi anya aha ya? Ka anyị ka Bible zaa ajụjụ ahụ. Mkpughe 13:18 (LB) - "... space ụkpụrụ nke akwụkwọ ozi n'aha-Ya tinye 666." Nke a Akwụkwọ Nsọ kwuru hoo haa, na-egosi na 666 bụ nanị space nchikota uru nke aha nke anụ ọhịa! Dị ka ihe atụ, na-aha "VIX." Ọ bụrụ na anyị na-eji "Roman numerals" mgbe ahụ V = 5, m = 1, & X = 10. Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye ihe na space uru nke ọ bụla akwụkwọ ozi nke a aha (5 + 1 + 10) anyị na-enweta 16. ya mere, Vix ike omume na-anụ ọhịa n'ihi aha ya naanị agbakwụnye ruo 16 (mgbe aha nke anụ ọhịa ga tinye aka 666). Ma ọ bụrụ na Vix bụ anụ ọhịa, onye bụ?
WHO BỤ ANỤ ỌHỊA?
Ya mere WHO bụ nke a anụ ọhịa ahụ (i.e. àmà na-egosi)? Ọ bụ a United European superpower (a di ndu "Holy" Alaeze Ukwu Rom) dị ka ụfọdụ na-akụzi? Ma ọ bụ bụ anụ ọhịa onye ndú nke a dị ndụ ọzọ usoro? Anụ ọhịa bụ ihe atụ nke abụọ-ma alaeze ukwu ahụ na onye ndú! Ma mbụ ọ pụtara ya onye ndú. Iji gosi na ọ pụtara ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú nke a n'oge na-adịghị-abịa usoro ka na-echigharịkwuru ọzọ Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ Mkpughe. Mkpughe 19: 20- "Mgbe ahụ, anụ ọhịa ahụ e weghaara, ya na onye amụma ụgha .... Abụọ ndị a na-achụpụ ndụ n'ime ọdọ ọkụ na-ere brimstone "(NKJ). Nke a Akwụkwọ Nsọ gosiri n'ụzọ doro anya na anụ ọhịa ahụ nọchiri anya ihe ọgwụgwụ oge mmadu, n'ihi na ma ya ma ndị amụma ụgha na-ẹsịn ọdọ ọkụ!
NKỊTỊ, ANỤ AHỤ MAK?
Ma, gịnị n'ezie bụ akara nke anụ ọhịa, nke e ji a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú? Ọ ga-abụ a n'ụzọ anụ ahụ, nkịtị MAK (ma ọ bụ onye a bụ akara dị nnọọ a tụnyere, na-enwe ụdị ụfọdụ nke zoro ezo, omimi pụtara)?
The akara nke anụ ọhịa ga-maa-abụ a nkịtị anụ ahụ akara! Na Mkpughe 13:16 & 14:11 ọtụtụ dị iche iche nsụgharị nke Bible (GW, NOG, EXB, ọchịchị, & na JB) ala na akara nke anụ ọhịa ga-"kpọọ ndị" na mmadu. The AMPC, NABRE, & ndị EXB ala na akara nke anụ ọhịa ga-zọọ na ndị mmadụ. Ma m na-amasị otú Living Bible na-asụgharị n'amaokwu abụọ ndị kasị mma, dị ka ọ na-ekwu na akara nke anụ ọhịa ga-"egbugbu" on ụmụ mmadụ! Ma n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na akara nke anụ ọhịa-ewere, zọọ, ma ọ bụ egbugbu, ndị a niile nsụgharị ji otu olu na-ekweta na akara ga-a nkịtị anụ ahụ MAK na ndị ọzọ ga-adị mfe-enwe ike ịhụ!
ANATA MAK = ỊKWADO SATAN!
Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ Mkpughe nke ọma (karịsịa isi nke 14) Ị ga-achọpụta na onye ọ bụla ji obi ya enweta akara nke anụ ọhịa ga-nnọọ ahụhụ site na Chineke. Ma Chineke n'ezie ga ajọ omume na onye nwere a akara ahụ amanye n'elu ha aka, ọ gaghịkwa ata onye ọ maghị na-enweta nke a akara (dị ka ụfọdụ izu ọjọọ theorists akụziri)! The mmadụ ga-akpachara, ji obi anabata akara.
Ma onye ọ bula na ọ kpachaara-enye ohere akara nke anụ ọhịa ka-etinye na ya ma ọ bụ ya aru (ma na ha n'aka nri ma ọ bụ n'egedege ihu ha) ga-aga megide Chineke kpọmkwem! Kama ige Onye Okike ha, ha ga-kama a ga-erubere Setan isi! Ha ga na kachasi mkpa na-pledging nkwado ha na iguzosi ike n'ihe ha na-Setan bụ Ekwensu (lee Nkpughe 13:16 ma IGBOB & EXB nsụgharị nke Bible)! Na ndị na-eme otú ahụ ga-dọsie ya ahuhu, ndị Chineke na Ha ga-abụkwa enweghị ihe ngọpụ, n'ihi na ọ bụghị nanị na ahụ ga-adị àmà abụọ (ma ọ bụ amuma) na-gwakwa ha na ha na-efe anụ ọhịa (ma ọ bụ ya awụ) ma ọ bụ na-enweta ya akara, ma otu mmụọ ozi si n'eluigwe ga-enye iwu ndị bi n'ụwa agaghị eme otú ahụ (Mkpughe 14: 9)!
AHA NKE ANỤ ỌHỊA?
N'ihi ya, gịnị bụ aha nke anụ ọhịa? Na onye ga-a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú abụ? Onye ọ bụla ọ bụ, otu ihe anyị maara n'ezie, akwụkwọ ozi n'aha ya ga tinye aka 666! Ma ọ bụla pụrụ isi na-eche nke a mma aha karịa Rom?
Na mbụ, "Rom" nwere ike sụgharịrị dị ka "LATEINOS" n'asụsụ Grik,. (Ma gịnị mere na-eji asụsụ Grik? N'ihi na ọtụtụ ndị New Testament mbụ e dere ihe na Greek-gụnyere akwụkwọ Mkpughe). N'asusu Grik "L" na-anọchi anya nọmba 30, "A" bụ 1, "T" bụ 300, "E" bụ 5, "m" bụ 10, "N" bụ 50, "O" bụ 70, na " S "na-200. Tinye ha (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) gịnịkwa ka ị ga-esi? 666!
Nke abuo, ma ọ bụrụ na aha ya bụ "Rom," ọ ga-adị ka ozizi Atọ n'Ime Otu dị ka ọ ga na-anọchi anya ihe atọ na otu. Ọ bụghị naanị na ọ ga-eji aha a ọgwụgwụ oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ndú, ma ọ na-ga-anọchi anya Alaeze Ukwu Rom nakwa dị ka onye Rom (Catholic) Church.
ỊDỌ AKA NA NTỊ!
N'agbanyeghị ihe ị na-eme n'ọdịnihu, DỊGHỊ (n'ọnọdụ ọ bụla ha ra, bú!)-Enweta akara nke anụ ọhịa ma ọ bụ na-efe ya (i.e. àmà na-egosi) ma ọ bụ ya kpụrụ akpụ !!!
"Ụmụntakịrị, ọ bụ awa ikpeazụ; na ka unu nụrụ na ... àmà na-egosi na-abịa ... The nwoke nke mmehie ... nwa adiana ke adiana, onye na-emegide ma ebuli onwe ya elu karịa ihe ọ na-akpọ Chineke ma ọ bụ na-efe ofufe ... Ọ ga-ọbụna-anọdụ ala ụlọ nsọ Chineke, na-azọrọ na ya onwe ya bụ Chineke "(1 John 2:18 NKJ; 2 Thess. 2: 3-4 NKJ; 2 Thess. 2: 4 NLT).
"Mgbe ahụ, o wee meghee ọnụ na nkwulu e kwuluru Chineke, na-ekwulu aha ya, ya ụlọikwuu ahụ nakwa ndị bi n'eluigwe. Ewe enyekwa ya ike ka agha ndị nsọ [EZIGBO Ndị Kraịst] na imeri [imeri] ha. Na ikike e nyere ya ọ bụla n'ebo, ire, na mba. Na ndi nile bi n'elu ụwa ga-efe ya, ndi aha-emeghị dere ha n'Akwụkwọ nke Ndụ ... "(Nkpughe 13: 6-8 NKJ).
"Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-efe anụ ọhịa ahụ [i.e. àmà na-egosi] na onyinyo [i.e. ya awụ], na-enweta ya akara na ọkpọiso ma ọ bụ n'aka ya, ya onwe ya ga-aṅụ mmanya nke iwe Chineke, nke a na-awụpụ zuru ike nime iko nke iwe ya. Agēme kwa ka o emekpa ọkụ na brimstone n'iru mmụọ ozi dị nsọ na n'ihu Nwa Atụrụ ahụ [i.e. Jesu Kristi]. Na-ese ha ntaramahụhụ ọdọk ke nsinsi nsinsi, na ha nwere adịghị ike ụbọchị ma ọ bụ n'abalị, ndị na-efe anụ ọhịa ahụ na onyinyo ya, na onye ọ bụla-enweta akara aha ya "(Mkpu 14: 9-11 NKJ).
Maka ozi ọzọ banyere akara anụ ọhịa ahụ, biko gụọ "Mkpughe Abịa Dị Ndụ" na "The àmà na-egosi & The Final 7 Afọ." Ihe e dere dị maka FREE na: www.TheBibleComesAlive.com
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịgụ nke ọ bụla n'ime m isiokwu ma ọ bụ akwụkwọ na asụsụ gị, dị nnọọ pịa na-esonụ njikọ:
Nke a njikọ ga-ịsụgharị niile m na ihe odide site English na asụsụ gị. Ma, ọ nwere ike na-asụgharị 1 page na a oge.